जीडीपीको आकारभन्दा बैंकहरूको कुल निक्षेप अधिक
काठमाडौं । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग भएको कुल निक्षेपको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) भन्दा बढी देखिएको छ । कुल कर्जा र बजार पूँजीकरण पनि जीडीपीको आकारलाई टक्कर दिनेतर्फ अग्रसर भएको देखिन्छ ।
सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप रू.३९ खर्ब ९३ अर्ब ८९ करोड रहेको छ । यस्तै, १८ ओटा विकास बैंकको कुल निक्षेप ४ खर्ब १५ अर्ब ७६ करोड रहेको छ भने २० ओटा वित्त कम्पनीहरूको निक्षेप रू. १ खर्ब ७२ करोड रहेको छ । जीडीपीभन्दा निक्षेपको आकार बढिरहँदा बैंकिङ कारोबारको मात्रा राम्रै गतिमा बढेको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबार बढे पनि जीडीपीको आकार भने बढ्न सकेको छैन । यसले आर्थिक वृद्धि बढ्न नसकेको पनि देखाउँछ ।
बैंकमा निक्षेप बढ्ने क्रम देखिएकाले भने सर्वसाधारणले घरमा पैसा राख्नभन्दा पनि बैंकमा राख्ने बानी बढेको आकलन गर्न सकिने बैंकरहरू बताउँछन् । पूर्वबैंकर तथा राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी टेकनाथ पोखरेल बैंकहरूको निक्षेपको वृद्धिलाई हेर्दा जीडीपीको वृद्धि भने कम भएको आकलन गर्छन् ।
बैंकहरूको निक्षेप बढे पनि आन्तरिक उत्पादन बढ्न नसकेको अर्थविद्हरू औंल्याउँछन् । रेमिट्यान्सका कारण निक्षेप धेरै बढे पनि यसले आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्न सहयोग नगर्ने अर्थविद् केशव आचार्यको भनाइ छ । वित्तीय विकास चरम भएको देशमा जीडीपीभन्दा निक्षेप तथा कर्जाजस्ता बैंकिङ कारोबार ठूलो हुनु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ । ‘जीडीपीभन्दा बैंकको कारोबारको आकार बढ्नु भनेको अर्थतन्त्रको मौद्रिकीकरण पूरा हुनु हो ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाह भने जीडीपीको तुलनामा ९८ प्रतिशत रहेको छ । गत जेठसम्म कुल कर्जा प्रवाह रू. ४० खर्ब ९५ अर्ब पुगेको छ । कर्जा निक्षेपको आकार बढ्नु भनेको वित्तीय पहुँच र विकास बढेको अर्थविद् आचार्य बताउँछन् ।
अहिले पूँजी बजारको आकारले पनि जीडिपीको आकारलाई टक्कर दिन लागेको छ । बजार पूँजीकरणको आकार जीडीपीको आकारको तुलनामा ९३ दशमलव ६१ प्रतिशत पुगेको छ । अर्थात् नेपाल स्टक एक्सचेन्जको असार २९ गतेसम्मको तथ्यांकमा कुल बजार पूँजीकरण रू. ३९ खर्ब ९३ अर्ब ७५ करोड पुगेको छ । यसरी बजार पूँजीकरणको आकार पनि बढ्दै जानुमा अर्थविद् आचार्य भने नेपालमा वित्तीय सरलता बढेको तर्क गर्छन् । विकसित मुलुकमा जीडीपीभन्दा वित्तीय आकार धेरै बढी हुनेगरेको छ । यो सकारात्मक पक्ष भएको उनले बताए ।
राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशन : बैंकिङ स्थायित्व कायम गर्न प्रोभजनिङमा कडाइ[२०७८ सावन, १२]
मार्जिन प्रकृतिको कर्जा वृद्धि न्यून[२०७८ सावन, १०]
ब्रोकर नियमावली संशोधनको अन्तिम तयारी[२०७८ सावन, १०]
बजारमा पर्याप्त तरलता : आधारदर बढ्दा कर्जाको ब्याजदरमा दबाब[२०७८ सावन, ५]
जीडीपीको आकारभन्दा बैंकहरूको कुल निक्षेप अधिक[२०७८ सावन, १]